कखरा संवाददाता « Kakharaa
Author: कखरा संवाददाता
काठमाडौं । विभागीय टोलीद्वय त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बुधबार जित निकालेका छन् । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आर्मीले प्रदेश–१
काठमाडौं । सरकारले हालै परीक्षणको रुपमा सार्वजनिक गरेको नागरिक एपमा उत्साहपूर्ण आकर्षण देखिएको छ । सम्भव भएसम्मका सबै सरकारी सेवा एउटै एपबाट दिने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो एपमा खाता खोल्न
काठमाडौं । ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरेको छ । कोभिड–१९
भारतबाट १० लाख कोरोना खोप काठमाडौं ल्याइँदै
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पहलमा भारत सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आज (बिहीबार) काठमाडौं आइपुग्दै छ । सो खोप जोखिममा खटिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर
सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं । कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोभिडका कारण थला परेका साना तथा मझौला उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता व्यवसायीलाई राहतस्वरूप प्रदेश
सन्दकपुर जान अब नेपालकै बाटो, भारतको बाटो प्रयोग गर्नु नपर्ने
इलाम । प्रदेश १ को प्रमुख पर्यटकीय स्थल इलामको सन्दकपुरमा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको ७१ लाख रुपैयाँको लगानीमा सन्दकपुरको पर्यटकीय क्षेत्रमा २ हजार ३ सय
भट्टराईप्रति करिश्माको कटाक्ष – यहि हो राजनीतिक संस्कार ?
काठमाडौं । केही समय सँगै सहकार्य गरेकी नायिका करिश्मा मानन्धरले डा. बाबुराम भट्टराईप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको जनसभामा सहभागी हुन आह्वान गरेको भट्टराईको फेसबुक स्टाटस सेयर गर्दै
नेकपा नफुटेसम्म सत्ताकाे जोडघटाउमा नलाग्ने कांग्रेसकाे भनाइ
पोखरा । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सत्तारुढ नेकपा विभाजनको टुङ्गो नलाग्दासम्म सरकार गठनको जोडघटाउमा नलाग्ने बताउनुभएको छ । बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता
हामीबाट गल्ती भएकै हो : दाहाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक अवस्था यस्तो हुनुमा आफुहरुको पनि जिम्मेवारी रहेको स्वीकार्नुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा विभिन्न संचार माध्यमका प्रमुख तथा सम्पादकहरु संगको भेटमा